Gbasara anyị - ASAKA Machinery Manufacturer & Supplier
ZHI XING igwe (HANGZHOU) CO., LTD.
Zhi Xing Machinery mgbe niile rube isi ahịa mbụ, erube nsuko, na-ezi okwukwe ụkpụrụ, na-ejidekwa àgwà ziri ezi ka afọ ju ahịa 'ina.
Zhi Xing igwe
Zhixing Machinery, emi odude ke mma obodo nke Hangzhou, bụ ọkachamara soplaya nke eweli ngwaahịa. Isi ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ gụnyere belt na-ebuli elu, akwụkwọ ntuziaka, ihe ọkụ eletrik, nkịta, agbụ ígwè na ngwa ndị ọzọ na-ebuli elu. Ngwaahịa agafeela OA, GS na asambodo ndị ọzọ, ma rube isi na ụkpụrụ ụwa dịka ụkpụrụ Australia na America. N'ime ngwaahịa anyị, slings, ihe ndozi na jacks dị asọmpi n'ahịa. Ha bụ ndị anyị ụlọ ọrụ bụ isi ngwaahịa, nke natara ezi ahịa feedback.Our ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị afọ 15 nke ahụmahụ na-eweli ụlọ ọrụ nakwa dị ka ike eweli ngwaahịa mwekota ọrụ na ngwọta ike. Companylọ ọrụ anyị nwere ahụmịhe na-ebupụ na mba 30, yabụ anyị maara nke ọma ụkpụrụ mbupụ na mmasị ahịa nke ibuli ngwaahịa sitere na Japan, United States, United Kingdom, Germany, Australia, Singapore, Indonesia na mba ndị ọzọ. Ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri, Ngwuputa na nkà na ụzụ, n'ichepụta ngwá ọrụ, nnapụta ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ njem, nchara ígwè, nlekọta mmiri, ike eletrik, ike ikuku, iwu, wdg.
Anyị ụlọ ọrụ a na-agba mbọ na-enye ndị ahịa na ukwuu asọmpi na ike eweli ngwaahịa, mgbe na-enye ndị ahịa na ihe ndị kasị oru oma na-echegbu onwe-free àgwà ọrụ. Anyị ụlọ ọrụ nditịm akara àgwà nke ngwaahịa, na-erube nnọọ mejuputa tupu mmepụta sample nnyocha nke ọ bụla ogbe nke ngwongwo, na random nnyocha nke mmepụta usoro, nnyocha nke okokụre ngwaahịa tupu Mbupu, na nrubeisi nke nnyocha akụkọ mgbe Mbupu ka hụ na ngwaahịa dị oke mma.
Aha ụlọ ọrụ anyị "Zhixing" pụtara na ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso echiche nke ịdị n'otu nke ihe ọmụma na omume, na-emeso ndị ahịa ọ bụla ihe n'eziokwu na n'eziokwu. Enweghị aghụghọ, enweghị zoro ezo na enweghị uru. Anyị na-agbasi mbọ ike ịghọ onye kwụsiri ike, mmeri ma nwee ntụkwasị obi na-akwado mmepe!